HomeTURKEYGobolka Waqooyi-galbeed ee Anatolia27 GaziantepSaldhigyada Basaska ee Lagu Kordhiyo Belkıs
09 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 27 Gaziantep, Gobolka Waqooyi-galbeed ee Anatolia, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, TURKEY 0
laga yaabee in joogsiga basku kordhiyo
Duqa Magaalada Gaziantep Fatma Sahin, Degmada Belkis ee degmada Sehitkamil waxay booqdeen xaafadaha. Sahin, si loo xalliyo dhibaatada joogsiyada basaska oo aan ku filnayn kooxda xaafadda, Belkis wuxuu codsaday in la bilaabo dadaallo lagu kordhinayo joogsiga baska ee xaafadda.
Isaga oo la hadlaya magaca degmada bulshada, Fatma Şahin waxay sii waday inay booqato xaafada si ay u aragto dhibaatooyinka jira isla markaana ay dhagaysanayso muwaadiniinta. Baadhitaanka dhibaatooyinka muhaajiriinta xaafada Şahin, habka xallinta mushkiladaha ku saleysan xallinta ayaa mar kale carshiga ka dhigtay qalbiyada muwaadiniinta.
Mesaisine, Şehitkâmil Belkıs ee degmada, oo ka bilaabanaysa Sahin, labadaba shaqadii lagu qabtay goobta waxaa la baarey, sidoo kale waxay cadeeyeen cillad darrada ka jirta xaafada, kooxdu waxay bixisay tilmaamo si meesha looga saaro cilladaha.
Milicsi shaqadii la dhammaystiray iyadoo lala tashanayo madaxa deriska Enver Özekici'yle Sahin, cufnaanta gaadiidka dadweynaha ee xaafadaha oo ay sabab u tahay soohdinta sii kordhaysa ee xaafadaha oo aan jawaab ku filan ka bixinaynin rabitaanka ah in la kordhiyo tirada joogsiga basaska, ayaa weydiistay kooxda inay bilaabaan shaqada xallinta dhibaatada. Mukhtaar Özekici'yi wuxuu daaha ka qaadayaa joogsiyada isagoo madaxweynaha qaadanaya, muwaadiniinta goobta joogtana waxay si aad ah u daneynayeen gaariga, cagahooda ayey ku sheekeysteen.
Xaafadda Belkis sanado badan si loo xalliyo biyo yaraanta loo hayo Madaxweynaha Fatma Sahin ayaa uga mahadcelineysa dadaalka ay muujiyeen dadka deggan xaafadaha, rafcaanka xaafadaha iyo dhameystirka shaqada ee xaafadaha ayaa lagu xallin doonaa dhammaystir la’aanta, ayuu yiri.
Kordhinta Tram Stop in Gaziantep Kordhay Capacity Capacity 14 / 01 / 2018 Kordhinta joogsiyada iyo kordhinta baabuurta tareenada ee ay maamusho Gaziulaş, oo ah xero gole degmada Magaalooyinka Gaziantep, ayaa kordhiyay awoodda rakaabka. Kororka tirada dadka rakaabka ah ee doorbidaya taraamidda nidaamka gaadiidka ayaa sababay kordhinta awoodda baabuurta ku shaqaysa nidaamka tareenka iyo kordhinta joogsiyada. Waxaa sidoo kale la sheegay in fursado badan oo gaadiidka fudud loo abuuray daraasadaha. Sida laga soo xigtay qoraaga saraakiisha Gaziulas; Ka hor intaan la joogin joogsiga joogsiga, baabuurta ugu badan waxaa lagu shaqeeyaa xøumX wagon ee 2017. Sidan, raaxeeyaha rakaabka waa la hagaajiyay. Saraakiisha Gaziulas, 38 sannadkii, xitaa tirada tirada baabuurta waday ee maalinlaha ah ee 2018 ayaa qorsheynaya in ay kordhiso ...
Horumarinta kordhinta shirkadaha basaska ee Jarmalka 24 / 04 / 2014 Jarmalka, dhiirigelinta shirkadaha basaska ayaa kor u kacay markii monopoly ee tareenada la kordhiyey: Safarka Intercity wuxuu ku sii kordhayaa Jarmalka tan iyo 2013 iyo heerka socdaalka basaska ee sii kordhaya ka dib markii monopoly ee Tareenada Jarmalka (DB). Socdaalka basaska, oo celcelis ahaan ka jaban 50 tareenka, guud ahaan magaalooyinka magaalooyinka waa weyn. Baden-Württemberg (BW) waa mid ka mid ah dawladaha kor u qaadaya shirkadaha basaska. Sannadkan, Waaxda Gaadiidka ee Gobolka ayaa ka mid ahaa shirkadda basaska 73 oo ah dhiirigelin. Lacagta hibada leh waxay gaari doontaa 5 Milyan Euros sannadkan. Dhiirashadu way kala duwan tahay 17 kun 500 iyo 157.500 Euros iyadoo ku xiran xaaladda shirkadaha. Hadday baabuurtu yihiin jawi bey'adeed markaad bixineyso dhiirigelin ...
Soo jiidashada buuraha Hasan ayaa la kordhin doonaa
Rugta Dastuurka Ruushka ee Ruushka ayaa kor u qaadi doona 13
Tareenka tareenada joogsiga basaska